Masakan'i Sri Lanka ~ Journey-Assist - lovia nasionaly. dite
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Sri Lanka » Masakan'i Sri Lanka
Sakavon'i Sri Lanka. Fandrahoan-tsakafo. Lovia nasionaly
Lovia lehibe Sri Lankan
Saosy malaza ao Sri Lanka
Mampiavaka ny fandrahoana Sri Lankan
Ny fitaoman'ny India amin'ny fandrahoan-tsakafo Sri Lanka
Ny sakafo ao amin'ity firenena ity dia mitovy amin'ny indianina. Ny antony dia akaiky India ary Sri Lanka, ary koa vokatra marobe izay ampiasaina any amin'ireo firenena roa ireo ho an'ny tanjona fitsaboana.
Sri Lankans - legioma
Zavamaniry ny sakafo tany am-boalohany ao amin'ny Sri Lankans, saika tsy misy hena hihinana amin'ity nosy ity. Fa kosa trondro, hazan-dranomasina, voankazo an-toerana sy ny zava-manitra isan-karazany dia lanin'ny be dia be. Ary ny sakafom-biby rehetra dia avy amin'ny eoropeana na Arabo.
Ny vary dia fototry ny lovia any Sri Lanka.
Sri Lanka dia mitombo karazana vary 15
Ny ankamaroan'ny lovia any Sri Lanka, anisan'izany ny tsindrin-tsakafo, dia voaomana amin'ny sakafo fototra - ny vary sy ny kobam-bary (15 karazana ny vidin'ny vary ao amin'ny nosy). Be dia be koa ny zava-manitra misy lovia miaraka amin'ny vary, ary miaraka aminy ihany koa ny vokatra hafa rehetra ao an-toerana - akorandriaka, crustaceans, trondro, voankazo, legioma. Ary koa, ny mitambatra no tena mahavariana sy tsy mahazatra antsika.
Fangaro fahandro malaza
Sauce sy zava-manitra
Ireto fitaovana manaraka ireto dia azo ampiharina amin'ny laminasa Sri Lankan: ronono voanio, Chili, tongolo, tongolo gasy, sakamalaho и sokay. Ny akora tena ilaina amin'ny lovia nasionaly dia ny katsaka, lentika, paiso ary lafarinina, izay atao eto avy amin'ireny zavamaniry rehetra ireny.
Voankazo sy legioma ao Sri Lanka mahandro sakafo
Ny voankazo sy anana dia singa tena ilaina amin'ny fandrahoan'i Sri Lankan. Manao salady ry zareo. Ny voatabia fahita indrindra tongolo, dipoavatra, felam-borona, ahitra eo an-toerana ary ravina amin'ny zavamaniry tropikaly, voninkazo kactus ary zavamaniry akondro. Ny ranomasina dia mihinana be ihany any Sri Lanka.
Fomba fitsaboana amin'ny hafanana amin'ny fandrahoan-tsakafo
Ny fomba nentim-paharazana amin'ny fahandroana ireo lovia izay misy karazana fitsaboana hafanana dia misy ny fampiasana tanimanga na lovia vy vita amin'ny tanana. Vonona ny afo miaraka amina afo misokatra.
Ny fitarihan'izao tontolo izao amin'ny fomban-drazana culinary an'i Sri Lanka
Omelet ao amin'ny kafe Sri Lankan
afa-tsy India, Arabo, Holandey, Anglisy, Sinoa ary indonezianina amin'ny fomba fihinanan-tena dia nisy fiantraikany tamin'ny sakafo teo an-toerana. Ho an'ireo manokana, ny karazana pilaf toa ny pilau sy ny biryan dia avy amin'ny sakafo arabo any Sri Lankan.
Ny lovia britanika any Sri Lanka, ny mofomamy, ny mofo, ny ovy miaraka amin'ny hazandrano ary ny atody efa namboarina dia nahazo laza. avy amin'ny Of China aty no tonga ny henan-tsaramaso sy karazan-kafe isan-karazany avy any Holandy - lamprays, ary avy Indonezia - sambol.
Kilasy fahandro nentim-paharazana Sri Lanka
Ho an'ireo maniry hifankahalala amin'ny sakafo nasionaly any Sri Lanka dia hita any amin'ny toerana rehetra ny kilasy fampiofanana "Ny kilasy". Ny famantarana miaraka amin'ny soratra mitovy ana dia tsy sarotra ny mahita. Ny hotely maro dia manolotra programa fiofanana sasany amin'ny sarany. Eo koa ny serivisy ofisialy, ohatra Kilasy fahandro miaraka amin'i Sarogini Kamalanathan